RCC "जिक्रोन": विशेषताहरु, परीक्षण। Hypersonic क्रूज मिसाइल "जिक्रोन"
आजको संसारमा हथियार दौड पनि खातामा अन्तिम वैश्विक द्वन्द्व सत्तरी भन्दा बढी वर्ष पहिले लागि देखा परेको छ भन्ने तथ्यलाई लिएर, अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। तथापि, तब देखि स्थानीय संघर्ष त हरेक वर्ष देश मा डलर को अरबौं खर्च गरेर नयाँ र नयाँ हतियार विकास छैन रोकिएको छ। निस्सन्देह, प्रक्रिया मा superpowers रूपमा सक्रिय संलग्न र रूसी संघ। ASM "जिक्रोन" - यस लेखमा देश को नवीनतम घटनाहरु को एक मा केंद्रित। पहिलो, गरेको बुझ्न को RCC र कसरी यो प्रविधि गरे के गरौं। र त्यसपछि यसलाई सिधै सबैभन्दा ASM "जिक्रोन" को विचार जान सम्भव हुनेछ।
RCC - यो विरोधी जहाज मिसाइलहरु, छ, पानी को उद्देश्य पराजित डिजाइन हतियार को प्रकार। सैन्य ईन्जिनियरहरु हावा मार्फत खुलेर सार्न र प्रतिद्वन्द्वीको गरेको लक्ष्य मारा सक्छ जो अमानवचलित हवाई वाहन, को सपना देख्यो जब यो हतियार को पहिलो परियोजनाहरु, पहिलो विश्व युद्ध को समयमा देखियो। तर, पहिलो पटक यस्तो परियोजना कागज मा थिएन, तर वास्तवमा दोस्रो विश्व युद्ध को समय पहिले देखि नै छ। 1943 मा, जर्मनी सफलतापूर्वक यस्तै विरोधी जहाज मिसाइल प्रयोग गरेको छ - र तब देखि हतियार यस प्रकार को सक्रिय उत्पादन गर्न थाले।
दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा, यी मिसाइलहरु पनि जापान र अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थापित गरेको छ, र युद्ध समाप्त पन्ध्र वर्ष पछि, पहिलो विकसित RCC सोभियत संघ मा प्रयोग भएको थियो - यो एक मिसाइल पी-15 "दीमक" थियो। त्यतिबेलादेखि निरन्तर विकास र सुधार छन् विभिन्न विरोधी जहाज मिसाइलहरु उत्पादन विभिन्न देशहरूमा। पहिलो जर्मन PKR 1943 मात्र 18 किलोमिटर दूरी देखि आक्रमण गर्न सक्छ भने, सोभियत यस प्रकार देखि 1983 यू-750 "meteorite" 5,500 किलोमिटर दूरी ढाक्न हुनेछ।
तथापि, आधुनिक युद्धमा यो आक्रमण दायरा र पनि यसको शक्ति र विवेक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो - आज शुरू लामो तत्काल राडार देखेको र बारेमा तेह्र मीटर तल गोली गर्न छ "meteorite"। किन आधुनिक मिसाइलहरु आकार मा धेरै साना हुन्छन् छ, तर यो गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, दूरी को सबै भन्दा धेरै कम उचाईमा, शत्रु राडार गर्न अदृश्य बाँकी हुँदा उड गर्न, र त्यसपछि दायाँ लक्ष्य अगाडि जोडले अप सबैभन्दा प्रभावकारी यो लक्ष्य आक्रमण गर्न उड।
यसबाहेक, आजको डिजाइनर आफ्नै लक्ष्य चयन र जसबाट पटक को साधन को दक्षता वृद्धि, उनको मार्ग राखे सक्छ जो RCC को स्थापना, मा काम गर्दै छन्। तर, यो अमेरिकी डिजाइनर - तर के रूस बारेमा?
तपाईं ASM स्विच गर्न "जिक्रोन" आवश्यक जहाँ यो छ। यो मिसाइल विकास एक लामो समय को लागि जाँदै छ, र परीक्षण 2012 मा थालेका देखिन्छ, तर यो जानकारी पुष्टि छैन। ASM "जिक्रोन" को काखमा दौड को इतिहास मा एउटा नयाँ शब्द बन्न गर्नुपर्छ - तर यो के प्रतिनिधित्व गर्छ? सार्वजनिक थाह यसलाई के डाटा भएका छन्?
यो मिसाइल 3M22 "जिक्रोन" - रूसी सैन्य प्रविधिको नवीनतम घटनाहरु को छ। वास्तवमा, हामी छोटकरीमा परियोजना, यो hypersonic विरोधी जहाज मिसाइल परिचालन प्रयोग वर्णन भने। विकास, उत्पादन, परीक्षण र कमीशन मा काम 2011 मा सुरु - त्यसपछि प्रेस पहिलो उल्लेख आए। तथापि, वास्तविकता मा, काम बाहिर अघि लगे सकेन, तर यो जानकारी असम्भाव्य कसैले जारी वा पुष्टि गर्नेछ छ। यो मिसाइल को उत्पादन "ईन्जिनियरिङ् एनजीओ" छ - र यो जानकारी को आधारमा त्यहाँ 3M22 "जिक्रोन" मिसाइल नै निर्माता, "फायर" मिसाइल प्रणालीबाट अर्को परियोजना प्रत्यक्ष संतान छ अर्थात् अन्य अफवाहहरु छन्।
त्यसैले अब तपाईं के रकेट "जिक्रोन", हो साथै आफ्नो विकास सुरु भएको थियो रूपमा थाहा छ। निस्सन्देह, त्यहाँ सिद्धान्त को प्रेरकों सम्पूर्ण प्रक्रिया धेरै पहिले सुरु गरिएको, कि तर सिद्धान्त धेरै संग आउन सक्छन्। सत्यतथ्य रूपमा, त्यहाँ 2011 मा भएको थियो जो संग अनुसार कागजात,, उद्योग गरेको प्रमुख डिजाइनर को एक विशेष समूह जो मिसाइल र मिसाइल सिस्टम को विकास को कार्य पुरा सेट थियो गर्न द्वारा आयोजित भएको थियो।
यो 2011 मा थियो मिसाइल र यसको विभिन्न subsystems दुवै को पहिलो रेखाचित्र समावेश गर्नुहोस्। सबै विकासक्रम, को "NPO मिसिन भवन", साथै यसको संरचनात्मक प्रभाग मा बाहिर थिए सहित UPKB "विस्तार"। तर, यी रकेट को बस ठूलो उत्पादन ओरेनबर्ग सहरमा सफ्टवेयर "तीर" मा गरिनेछ। यी मा भविष्यमा परिवर्तन हुन सक्छ भनेर प्रारम्भिक डाटा छन्, तर 2016 को रूपमा मिसाइलहरु "जिक्रोन" को उत्पादन गर्न, ओरेनबर्ग "तीर" प्रयोग गर्न योजना छ।
त्यहाँ नयाँ मिसाइल "जिक्रोन" कहिल्यै जन्म सकिन्छ प्रमाण हो - 2012 मा, प्रेस आश्चर्यजनक जानकारी लीक गर्न थाले। धेरै स्रोतहरु परियोजना पूर्ण बन्द छ कि या त वा प्रमुख परिवर्तन को लागि निलम्बित रिपोर्ट। मान्छे मात्र यो परियोजना मा पुन: सुरु काम कि अनुमान गर्न सक्छ भनेर समयमा कुनै प्रमाण, पालना गरेनन्।
फलस्वरूप, सरकार "RADUGA" संग परियोजना "NPO मिसिन भवन" मा काम एकजुट निर्णय - यो चरण देश परियोजनाको सैन्य क्षेत्र को लागि यति महत्त्वपूर्ण काम फेरि सुरु गर्न लगियो। "जिक्रोन" सबै आवश्यक उपायहरु defrosted गरिएको छ परियोजनामा लिइएको छ भनेर रूसी संघ को नौसेना मा, सबै कुरा को बाबजुद भर्ना गर्न भएको थियो।
फलस्वरूप, यस रकेट मा काम पुन: सुरु, र 2013 वसन्त मा सार्वजनिक अन्तिम वर्षमा त्यहाँ केही कठिनाइ भएको छ कि, त्यसैले परियोजना मा काम निलम्बित गरिएको थियो, तर मिसाइलहरु को विकास को उन्मूलनको "जिक्रोन" बोली हुन सक्दैन सिके।
के हाल को वर्ष मा मस्यौदा संग भइरहेको छ? को पाठ्यक्रम, 2013 र 2014 को समयमा परियोजना को सक्रिय विकास थियो - उहाँको पहिलो परीक्षण धेरै पहिले बाहिर थिए भन्ने जानकारी पनि छ, उल्लिखित रूपमा तथापि, यो जानकारी कुनै एक स्वीकार्छन्। सरकारी स्रोतहरू अनुसार, यो केवल 2015 को यो मिसाइलहरु परीक्षणको लागि तयार हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गरेको गर्मी छ। सायद, प्रारम्भिक परीक्षण ठाउँ लिन गर्नुभयो, तर मा 2015 यसलाई पहिले नै राज्य स्तरमा पूर्ण-मात्रा परीक्षा थियो।
र परियोजना को समाप्तिमा ठूलो उत्पादन लागि तत्परता घोषणा गरिनेछ - फलस्वरूप, फेब्रुअरी 2016 मा यो परीक्षण पहिले नै शुरू भएको छ कि रिपोर्ट थियो। अप्रिल 2016 मा यो परीक्षण एक पुरा वर्ष को लागि पछिल्लो कि हुनेछ र 2017 मा पूरा हुनेछ, र RCC "जिक्रोन" को 2018 पहिले नै ठूलो उत्पादन सुरुवात हुनेछ रिपोर्ट थियो। यो मिसाइल को विशेषताहरु अझै पूर्णतया disclosed गरिएको छैन, तर हामी जो थप छलफल गरिनेछ विवरण, एकदम धेरै थाहा छ।
Hypersonic क्रूज मिसाइल 3M22 "जिक्रोन" रूसी मिसाइल cruiser 11442M चलाउन हुनेछ। स्वाभाविक, यो बस सवार लोड गरेर कुनै पनि अतिरिक्त उपकरण बिना रकेट सुरु गर्न असम्भव छ। डाटा cruisers विशेष लन्चर 3C-14-11442M संग सुसज्जित गरिनेछ किन छ। निकै हतियार यस प्रकार को कार्यक्षमता सुधार जो ठाडो लन्च को यो स्थापना। समय कुराहरू परिवर्तन गर्न सक्छन्, तर सबै भन्दा वर्तमान जानकारी ठ्याक्कै यो आज हो - तर, यी तथ्याङ्कले हुनत एकदम ताजा हो कि सम्झना गर्नुपर्छ, तर conjectural रहनेछ।
नियन्त्रण र निर्देशन सिस्टम
नियन्त्रण र निर्देशन प्रणाली, को "जिक्रोन" actuate गर्न प्रयोग गरिने, रूसी मिसाइलहरु अलग विकास भए। यी प्रणाली छ र मुख्य अवसर RCC झूठ देखि यो, तार्किक छ। उल्लिखित रूपमा, पहिलो विरोधी जहाज मिसाइलहरु धेरै टाढा उड गर्न सक्दैन, र निर्देशन बरु rudely गरियो। सुरु-अप, व्यवस्थापन, र मिसाइल निर्देशन अधिक ध्यान दिइएको छ त आजको संसारको अवस्था मा, एकदम भिन्न छन्।
अब PKR यसलाई उत्प्रेरित गर्छ रूपमा शत्रु राडार यो जोगिन र सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ जो लक्ष्य, आफ्नै बाटो प्रशस्त गर्न, र समायोजन अति कम उँचाइमा उड गर्न सक्नुहुन्छ। लागि मिसाइलहरु "जिक्रोन" प्रणाली विभिन्न स्थानहरूमा विकसित गरिएको छ। उदाहरणका लागि, autopilot प्रणाली र inertial नेभिगेसन को एनजीओ "ग्रेनाइट-इलेक्ट्रोन", र नियन्त्रण प्रणाली नै विकसित भएको थियो - "NPO इल्याक्ट्रोमेकानिक्स" मा। साथै, केही तत्व "NPO मिसिन भवन" माथि, अर्थात् UPKB "विस्तार" उल्लेख विकसित गरिएको छ।
प्रभाव मा मिसाइल ल्याउनेछ जो इन्जिन, लागि जाँदा, तिनीहरूले 2009-2010 मा विकसित गरिएको छ - को पाठ्यक्रम, कुनै एक आधिकारिक बयान गरे। यसबाहेक, यी इन्जिन कथित डिजाइन र एक विदेशी ग्राहक लागि निर्मित गर्दै छन्, तर, सबै भन्दा संभावना छ, यो जानकारी मात्र eyewash disseminated छ। तदनुसार, रकेट को डिजाइन को शुरुवात द्वारा "जिक्रोन" यसको लागि इन्जिन तयार र व्यवहार मा परीक्षण गरियो।
सबैभन्दा रोचक क्षणमा को एक, पाठ्यक्रम, को मिसाइल को प्राविधिक विशेषताहरु छन्। यो के गर्न सक्छ? प्रतियोगिता कस्तो एक अग्रणी RCC modernity सिर्जना गर्नेछ? यो मिसाइल 300 किलोमिटर दूरी मा आक्रमण र मच 0.85 को गति संग उड्यो गर्न सक्छन् - यो RCC अन्तिम सफल मोडेल, रूसी संघ को क्षेत्रमा स्थापित, पी-800 "गोमेद" छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ। के प्रस्ताव ASM "जिक्रोन"?
यो मिसाइल को गति प्रभावशाली छ र परियोजना को सबै भन्दा ठूलो लाभ को एउटा प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रारम्भिक डाटा अनुसार, यो मच 4.5 बारे गति पुग्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ अन्तिम उत्पादन गति पनि छ strides पुग्न सक्दैन सुझावहरू छन्। को मिसाइल सञ्चालन हुनेछ जुन दूरी लागि, यहाँ निर्माताहरू बस अचम्मको छन्। प्रारम्भिक डाटा अनुसार, यो 300-400 किलोमिटर हुनेछ, तर यी डाटा निश्चय गरिदिने छैन। त्यहाँ RCC "जिक्रोन" को दायरा लन्च ठूलो उत्पादन को समयमा 800 भन्दा कम किलोमिटर छ र किलोमिटर पनि हजारौं पुग्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई बारेमा जानकारी छ।
पहिले नै उल्लेख रूप मा, मिसाइल "जिक्रोन" को पहिलो आधिकारिक परीक्षण मात्र 2015 मा आयोजित गरियो, तर धेरै स्रोतहरु यो सारा सत्य छैन भनेर संकेत गर्छ। साँच्चै, आधिकारिक राज्य स्तर पहिलो परीक्षा मा 2015 थाले, उनि 2016 भर आयोजित थिए र 2017 मा सम्पन्न गरिनेछ। आफ्नो परिणाम अनुसार यो नयाँ RCC ठूलो उत्पादन हालिदिए गरिने पछि कुनै पनि संशोधनहरू लागि आवश्यकता मा निर्णय गरिनेछ।
तर, अझै पढ्ने लायक केही अनुमानको संग। उदाहरणका लागि, जुलाई-अगस्ट 2012 मा कहीं, यो Akhtuba मा विमान तू-22m3 देखि मिसाइल को एक हालने परीक्षण प्रतिबद्ध थियो - यो खराब थियो, र धेरै स्रोतहरु यो परियोजना विकास नै वर्ष मा निलम्बित गरिएको छ कि यस कारण लागि थियो भन्छन्।
त्यहाँ एक वर्ष पछि, Akhtubinsk, यो अर्को परीक्षण सञ्चालन भएको थियो - यो मिसाइल फेरि तथापि, विमान गिरावट आएको थियो, र यो सुरुवात उडान निकै छोटो थियो, एउटा विफलता थियो। यस रकेट ठ्याक्कै ASM "जिक्रोन", उहाँले रूसी संघ पहिले नै त्यो hypersonic मा उड मिसाइलहरु छ भने जो रणनीति मिसाइलहरु निगम को टाउको, एक साक्षात्कार दिन्छ थियो भनी विश्वास मैदान।
त्यसै वर्ष को सेप्टेम्बर मा Akhtuba तेस्रो भन्दा आयोजित थियो रकेट प्रक्षेपण विमान देखि - फेरि त्यो असफल भएको थियो। सायद, यो रूस मा समय मा परीक्षण गरिएको थियो जो रकेट "जिक्रोन", वा अन्य कुनै पनि सुपरसोनिक प्रोटोटाइप, को प्रोटोटाइप थियो।
यसअघि 2015 को गर्मी मा उल्लेख रूपमा गोप्य शुरूआत लागि आवश्यकता यो RCC पूर्ण-मात्रा राज्य परीक्षण "जिक्रोन" को तत्परता बारेमा घोषणा गरेको थियो रूपमा, अब भयो। र पहिलो परीक्षण नै वर्ष को डिसेम्बर मा भयो - यो अब विमान बाट सुरु भएको थियो। को landfill मा पहिलो आधिकारिक लन्च सिद्ध थियो जो देखि Nenoksa जमीन लन्च जटिल, सेट थियो। तर, त्यो असफल भयो - यो रकेट, हावा मा उडान, लगभग तुरुन्त भुइँमा खसे।
यी परीक्षण को सबै तथापि, गर्नुपर्छ पनि उड गर्न कहिल्यै रकेट थियो, असफल भएको छ। र यो मार्च 2016 मा भयो। सबै एउटै दायरा Nenoksa सुरु देखि जमीन लन्च जटिल, सफल साबित जो गरिएको छ। यो मिडिया आधिकारिक नयाँ ASM "जिक्रोन" को परीक्षण थाले घोषणा कि त थियो।
त्यसैले PRK "जिक्रोन" परीक्षण बारेमा एक वर्ष को लागि जाँदै गरिएको छ, यी परीक्षण को पूरा यस वर्षको लागि, भाग्य संग, ठूलो उत्पादन को सुरूवात योजना र छ। तर जहाँ यी मिसाइलहरु, जब तिनीहरूले तयार छन् हुनेछ? हामी पहिले देखि नै तिनीहरूले हाल आधुनिकीकरण यी मिसाइलहरु वसूल गर्न सक्षम हुन undergoes जो सशस्त्र cruiser 11442M, हुनेछ रिपोर्ट गरेका छन्।
तर, पनि अब-अवधि योजना छ। पहिलो, RPC "जिक्रोन" को cruiser 11442 "Petr Veliky", 2019 को लागि निर्धारित छ आधुनिकीकरण जो मा स्थापना हुनेछ। साथै, यी मिसाइलहरु "Husky" को पाँचौ पुस्ता को पनडुब्बी जहाजहरू आपूर्ति गरिनेछ। यी बहु-उद्देश्य आणविक पनडुब्बी अझै उत्पादन मा पनि प्रविष्ट गरेको छैन। तिनीहरूले डिजाइन चरण मा छन्। तर विरोधी जहाज मिसाइलहरु को पनडुब्बी डाटा गर्नेछ भन्ने "Husky" सिस्टम मा उनलाई एकीकृत गर्न एक दृश्य संग हदसम्म डिजाइन "जिक्रोन" घातक अविश्वसनीय खतरनाक र प्रभावकारी हुन्छ।
एकल-चरण ट्रांसफर्मर। उद्देश्य, संरचना र मुख्य विशेषताहरु
भेट्ने एमएस-21, नयाँ रूसी airliner
लेजर ठोस: सिद्धान्तहरू सञ्चालन, आवेदन
MSW को उदाहरण ब्रान्डिङ दृष्टिकोण को आधार मा उद्यम को वित्तीय स्थिरता को आकलन
Phenol तयारी: मुख्य तरिका
बाथरूम मा तल्ला को waterproofing - विशेष गरी सिफारिसहरू र
मेरी एक कविता विश्लेषण: Lermontov "म बाहिर बाटोमा एक्लै जाने"
दबाइ "Spitomin": प्रयोग, सङ्केत गर्छ, contraindications लागि निर्देशन
स्ट्रेचर भवन: मुख्य प्रकार। कसरी आफैलाई एक स्ट्रेचर बनाउन।
विशेषण को Defisnoe हिज्जे: नियम, उदाहरणहरू
संग्रहालय मास्को मा क्रान्ति को
के सपना एक गर्भपतन छ? सपना को अर्थ र व्याख्या
नवजात शिशुहरु मा torticollis को संकेत: गराउँछ, उपचार। torticollis संग मालिश
एक फरक सर्भर डोमेन स्थानान्तरण
उत्तर गोवा होटल मूल्यांकन सर्वश्रेष्ठ होटल
दार्शनिक फ्रेडरिख एंगेल्स: जीवनी र गतिविधिहरु
टमाटर - mulching र टीन